Sida loo helo xisaab xirfad leh barta Instagram? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sida loo yeesho xisaab xirfad leh barta Instagram?
Waxaa laga yaabaa 6, 2021 0 comments 363
Kordhinta soo noqoshada ganacsigaaga ayaa suurtagal ku ah shabakadaha bulshada, Instagram-na kama reebban sharciga. Iyada oo in ka badan 1000 bilyan oo isticmaaleyaal taabacsan, u adeegsiga barnaamijkan qaab suuq-geyn ah ayaa kaa caawin doona inaad ku riixdo waxa aad kula guuleysan karto shirkaddaada illaa xadka.
Noocyo badan oo la aqoonsan yahay oo ka mid ah laamaha kala duwan ee jira ayaa adeegsada Instagram si ay kor ugu qaadaan wax soo saarkooda. Qaar ka mid ah tusaalooyinka caanka ah waa qoraallada Google iyo noocyada moodooyinka.
Iyada oo loo marayo astaan ​​xirfadeedka barta 'Instagram' waxaad ku abuuri kartaa joogitaan muhiim ah websaydhka, iyada oo loo marayo asalka asalka ah iyo isdhexgalka bulshadaada isla markaana lagu kordhiyo muuqaalkaaga, adoo adeegsanaya tilmaam in koontadaada ama alaabadaadu ay ku qoran yihiin makiinadaha wax raadinta.
Si aad ugu yeelato xisaab xirfad leh barta Instagram, samee waxyaabaha soo socda:
Ka samayso koonto barta 'Instagram' ama marin u isticmaal magaca isticmaalaha iyo lambarka sirta ah haddii aad horay u leedahay astaan. Waxa kale oo aad ku geli kartaa xogta aad ku isticmaasho Facebook.
Ku hel boggaaga astaanta saddexda xarig ee jiifka ah, dhinaca kore ee midig ee koontadaada.
Gali qaybta "Settings". Markaad gasho qaybtaan, waxaad arki doontaa qaybta "koontada", oo markaad gujiso, ku siin doonta ikhtiyaarka "u beddel koontada xirfad-yaqaan".
Kadib, waxaad u baahan doontaa inaad ku xirto xisaabtaada xirfadleyda ah ee 'Instagram' koontada 'xirfadleyda' Facebook. Waa inaad abuurtaa xisaab xirfadle ah Facebook kahor intaadan abuurin xisaabtaada xirfadleyda ah ee 'Instagram'.
Marka xigta, waa inaad ku hagaajisaa koontadaada xirfadeed adiga username iyo password.
Astaamaha xirfad-yaqaan 'Instagram profile'
Waxa ugu horreeya ee aad ku arki doontid boggaaga ayaa ah badhanka xiriirka ee astaanta, iyo sidoo kale badhamada loogu talagalay "U wac ficil".
Waxaad sidoo kale arki doontaa suurtagalnimada inaad ku darto qaybta shirkaddaada. Waxaad intaa dheer ku dari kartaa cinwaanka shabakada ganacsigaaga. Sidoo kale, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad dhigto deegaanka, haddii ay dhacdo inaad leedahay meel muuqaal ah.
Dabcan, waxaad u abuuri kartaa xayeysiis xayeysiis shirkaddaada. Dhinaca kale, waxaa sidoo kale jiri doonta suurtagalnimada in lagu qiimeeyo waxqabadka koontadaada iyadoo loo marayo tirakoob.
Tirakoobyada qaarkood oo aad ka heli doontid xirfadle Instagram
Tusmooyinka qaarkood ee nooca noocan ah waxay ku siinayaan adiga, waqtiga isku xirnaanta iyo jinsigiisa. Tirada isdhexgalka daabacaadahaaga, tirada booqashooyinkaaga boggaaga, inta jeer ee ay gujiyeen cinwaanka shabakada ganacsigaaga, inta jeer ee ay la wadaageen daabacadahaaga, iyo kuwa kale.
Tirakoobka macluumaadkaaga waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo astaanta xariiqda jiifka ah ee dusha sare ee boggaaga. Markaad gasho, waxaad arki doontaa astaanta "tirakoobka" mid ka mid ah xulashooyinka lagu soo bandhigi doono tabta.
Qalab maareynta barta Instagram
Sida shabakadaha kale ee bulshada, barta 'Instagram waxaad ku adeegsan kartaa qaar ka mid ah barnaamijyada kaa caawinaya inaad maamusho koontooyinkaaga. Kuwaas oo aan ka xusi karno Panoply ama Hootsuite.
Qalab kasta wuxuu leeyahay qaabkiisa u gaarka ah ee shaqada wuxuuna ku siin doonaa boqolaal hawlood si aad ugu maamuli karto waxyaabaha aad ku bixiso koontadaada xirfadleyda ah ee 'Instagram' aragtida guud ee adduunka.
1 Si aad ugu yeelato xisaab xirfad leh barta Instagram, samee waxyaabaha soo socda:
2 Astaamaha xirfad-yaqaan 'Instagram profile'
3 Tirakoobyada qaarkood oo aad ka heli doontid xirfadle Instagram
4 Qalab maareynta barta Instagram
Mar dambe ma rabo rukummada 'Twitch prime'. Sideen uga saaraa?
Sidee looga warbixiyaa fiidiyow Youtube?